Ciyaaryahan diiday in uu qaado heesta calanka dalkiisa (maxaase u sabab ah ?) – SBC
Ciyaaryahan diiday in uu qaado heesta calanka dalkiisa (maxaase u sabab ah ?)
Ciyaaryahanka Adem Ljajic ee u dhashay Dalka Serbia oo horey uga mid ahaa Jamhuuriyadii burburtey ee Yugoslavia ayaa diiday in uu qaado heesta calanka dalkiisa xili uu u safnaa xulka qaranka dalkiisa arintaasi oo muran weyn ka dhalisay gudaha wadankaaasi.
Adem Ljajic oo dibnaha ka xirtey qaadista heesta calanka
Adem Ljajic oo todobaadkii hore saftey kulankii saaxiibtinimo ee u diyaar garowga ciyaaraha EURO 2012 ee dalkiisu la yeeshay dalka Spain oo koobkaasi ka qayb galaya ayaa laga daawaday shaashada Tv-yada ciyaartaasi tabinayey isagoo afka ka xirtey in uu la qaado heesta calanka ciyaaryahanad,a taageerayaasha, kooxda muustikada Bambeyda, iyo maamulka kooxda heesta calanka.
Sinisa Mihajlovic oo ah tababaraha xulka qaranka Serbia ayaa lagu wargaliyey talaabada uu ku kacay ciyaaryah Adem ee ah in uu dibnaha ka qabsadey la heesida heesta calanka, waxaana markii uu arintaasi su’aalay Adem Ljajic uu si fudud ugu jawaabay in sababo isaga u gaar ah uu u diiday in uu qaado heesta calanka dalkiisa, isla markaana aanay qorshaha ugu jirin in uu dib dambe u qaado heestaasi.
Hadaba maxay dhalisan arintan ?
Adem Ljajic ayaa markii uu go’aankaasi qaatey waxaa lagu wargaliyey in hadii aanu u hogaansameyn sharciyda ciyaaraha xulka qaranka dalkiisa inaanu dib dambe uga mid noqon doonin, iyadoo laga eryey xulka qaranka.
Maxaa u sabab ah dhacdadan ?
Ciyaaryahan Adem Ljajic waa ciyaaryahan Muslim ah oo ka soo jeeda Muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool Serbia, waxaana uu ku dhashay magaalada Novi Pazar oo ah magaalo ku taal Koonfurta galbeed ee Serbia halkaasi oo ay ku nool yihiin Muslimiinta Serbia.
Ciyaaryahan Adem oo ducaysanaya ka hor kulan ciyaareed
Muslimiinta Yuguslaviyadii hore ee iminka ku jira dawlada wadaaga ah ee Bosnia and Herzegovina & Serbiyiinta waxaa sanadihii sagaashameeyadii ka dhex qarxay dagaal ku saleysan Jisniyada iyo dhul kaasi oo sababay dhimashada boqolaal kun oo qof, xamil gab-ka boqolaal kun oo kale, barakaca malaayiin qof iyo bururka hani malaayiin doolar ku kacaysa.
Dagaalkaasi ku saleysnaa cirqiga ama Jinsiyada ayaa keenay in Yuguslavia u kala burburto Jamhuuriyado yar yar oo u kala baxay wadamo yar yar oo salka ku haya qawmiyado sida Serbiyiinta, Muslimiin, Croatia, Macedonia, Montenegro, Slovenia & Kosovo.
Hadaba arimahan salka ku haya caqiidada Diimeed iyo mida qowmiyadeed ayaa keenaysa in uu ciyaaryahan Adem uu diido in uu qaado heesta calanka dalkiisa, taasi oo ay macno ahaan ay ka buuxaan waxyaabo xambaarsan caqiiqada diimeed e Serbia ee Madhabta Orthodox ee k u xiran Kaniisada Serbian Orthodox Church ee Kirishtaanka.
Inkastoo Adem uu yahay muwaadin Serbia u dhashay maadama uu ka soo jeedo magaalada Novi Pazar ee Jamhuuriyada Serbia hadana wuxuu muujiyey waxa uu aamisan yahay isagoo arintaasi ka hadlaya mar la waydiiyey oo ay ku soo xoomeen saxafiyiin wuxuu yiri.
“Waan ka xumahay, waan jeclahay Serbia, laakiin waa inaan xushmeeya caqiidadeyda, waligey waxaan doonayey inaan u ciyaaro qarankan”.
Talaabada uu ku eryay tababare Sinisa Mihajlovic ciyaaryahan Adem ee ay la qaateen xiriirka kubada cagta Serbia ayaa si ba’an loo dhaliiyey, iyadoo lagu tilmaamay cunsurinimo ka dhan ah Diintiisa maadama uu diyaar u yahay in uu qaranka u safto uuna leeyahay awooda iyo kartida ciyaareed ee loo soo xulay markii horeba.
Tababare Delio Rossi oo feer la tiigsanaya ciyaaryahan Adem
Tababare Delio Rossi oo feerkii ciyaaryahan Adem shaqadiisii ku waayey
Adem Ljajic oo 20 sano jir ah wuxuu ka ciyaara khadka dhexe ee weerar ahaan ama dhex midig wuxuuna xiligan ka tirsan yahay kooxda Fiorentina ee horyaalka dalka Talyaaniga ka ciyaarta, isagoo u saftey 50 kulan una dhaliyey 6 gool.
Xidiga Adem Ljajic ma ahan markii ugu horeysay ee uu arimo uu ku lug leeyahay saxafada soo jiidato, bil ka hor waxaa gacanta ula tagey oo feer jaqda kaga guray tababarihii kooxda Fiorentina Delio Rossi ka dib markii muran uu dhexmarey isaga iyo ciyaaryahanka oo badal lagu sameeyey kulan Fiorentina ay la laheyd kooxda Navora ee Sera A Talaaniga ka dhisan, iyadoo feerkaasi lala tiigsadey Adem uu keenay in maamulka kooxda Fiorentina ay shaqada ka eryaan tababare Rossi oo lagu tilmaamay nin ka gudbay xadkiisii isla markaana u gacan qaaday ciyaaryahankiisa.
mahed ismail says:
waan ku taageersanahay in wax walba ay kawayntahay diinta islaamka, wax kastoo diinta kasoohorjeedana lagatago . waana wax lagu daydo mudan ciyaaryahan aadam oo dhashay dalka serbia waxaan leenahay wax ka khayr badan allaha kuu badalo diintana allaha nafahsiiyo dhamaanteen.
axlaaaaaam hassan says:
ammmmmmiiiiiiiiiiin ilaah diintiisa haku dhajiyo
masha allah waxasa rag ah long life my brother
c.csiis cabdale salax says:
adam waa balayr wen
Well done adem?
ngozi inaguanda liman says:
ur good fo nothing